Madaxweyne ku-xigeenka iyo Weftigiisii oo beri la filaayo inay London soo gadhaan | Salaan Media
Madaxweyne ku-xigeenka iyo Weftigiisii oo beri la filaayo inay London soo gadhaan
Addis Ababa, (SM)-Weftigii uu hogaaminayay Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa dalka Itoobiya ayaa caawa ka dhoofay madaarka Poli ee Caasimadda Addis ababa, una kicitimay dalka Ingiriiska.
Weftiga uu horkacayo Madaxweyne ku-xigeenku waxa ay Jaalliyadda Somaliland ee dalka Ingiriiska kala qayb gali doonaan xuska munaasibada 18-ka May oo sanadkan si balaadhan daafaha dunida looga xusayo, waxaana weftiga sugaya dadweyne fara badan oo Munaasibada Ingiriiska uga yimi dalal kala duwan.
Weftiga Madaxweyne ku-xigeenka waxay ka kooban Wasiiro, xildhibaanno, Guddoomiye Ku xigeenka koowaad ee KULMIYE xisbiga iyo masuuliyiin kale.
Xildhibaan Cabdilaahi Balaaki ka mid ah weftiga oo la hadlay warbaahinta qaarkeed ayaa xaqiijiyay in la siiyay fiisayaashii toddobaddii xubnood ee weftiga ahaa, isagoo intaas raaciyay Wasiirka ganacsigu inuu caawa isagu dhoofi doono.
“Caawa ayaanu baxaynaa, oo maanta ayay hawshii fiisayaashu noo dhamaatay, todoba xubnood baanu ahayn caawa lix ka mid ah ayaanu ku baxaynaa, wasiirka Ganacsiguna habeen dambe ayuu naga daba imanayaa.” ayuu yidhi Xildhaibaan Cabdilaahi Xuseen Balaaki.
Sidoo Kale, Afhayeenka Madaxtooyadda Somaliland Mudane Axmed Saleebaan Dhuxul iyo Guddoomiyaha Wargeysyadda Dawan Media Group Mudane Maxamed Cismaan Mirre (Sayid) ayaa iyaguna habeen dambe u ambo bixi doona dalka Norway , halkaasi oo ay Jaaliyadda Somaliland kala qeyb geli doonaan xafladda iyo dabaal dega munaasibadda 22-guurada ka soo wareegtay la soo noqoshada madax banaanida Somaliland.
Labada masuul waxa iyaguna safaaradda Norway u ogolaatay dal ku galkii, waxaanay noo sheegeen inay dalka Norway ku sugnaan doonaan illaa 28-ka Bishan May.